TAXADARKU WAA QAYB DIINTA KA MID AH. – Sumcadda Islaamka
In ilaahay la aamino lagu xirnaado oo la talo saarto waa wax wanaagsan oo ay diintanadu na farayso,caqli ahaana in awoodda sare ee Eebe ee ah midka waxa uu doono sameeya wax ku culusna aysan jirin la magan galo waa arin sax ah.
In Qadarta la Aamino iyana waa masalo uu iimaanku ina farayo.
Iyada oo ay intaas oo dhami jirto ayaa misana Eebe ina farayaa in aan taxadarka qaadano oon ka digtoonaano wax kasta oo waxyeello inoo gaysan kara oo ay cudurada halista ahi ka mid yihiin.
‎“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ..”
Wuxuu kale oo yiri:-
In Cudurada faafa layska ilaaliyo laysagana digo oo tallabo kasta oo lagaga hortagayo laysku dhiiri galiyo waa masalo diini ah oo uu caqliguna keenayo.
‎”فر من المجذوم كما تفر من الأسد”، أخرج الحديث البخاري بسنده في كتابه [الصحيح]
“Ka carar midka cudurka juudaanka qaba sida aad libaaxa oga cararto oo kale”.
Wuxuu kale oo uu yiri:-
‎””اتقوا المجذوم كما يتقى الأسد”،
“Iska ilaaliya midka cudurka faafa ee juudaanka qaba sida aad libaaxa isaga ilaalisaan oo kale”.
‎”إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها”
“Hadaad maqashaan in cudurka faafa ee daacuunka uu dhul ka dillaacay ha galina dhulkaas oo ha aadina,haddiise uu ka dillaaco daacuunku dhul aad ku sugan tihiin ha ka bixina dhulkaa”.
Rasuulka scw wuxuu mar kale yiri:
‎”«لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ»،رواه البخاري (5771)ورواه مسلم(2221)
“Yuusan u galin qof jirran – oo cudurada faafa qaba-qof caafimaad qaba”.
In cudur laga digtoonaadana maaha Qadar laga cararayo,Imaam Cumar ibnu khadaab rc ma uusan galin deegaan uu booqan lahaa oo wuu ka soo laabtay ka dib kolkii loo sheegay in uu deegaankaa ka dillaacay cudurka daacuunka,kolkii ay qaar dadkii la socday ku yiraahdeen ma Qadarta Eebe ayaanu ka baxsanaynaa Amiirkayagiiyoow,wuxuu ugu jawaabay haa
“نفر بقدر الله الي قدر الله”
“Waxaanu ka firxanaynaa Qadarta Eebe oo Waxaan oga firxanaynaa isla Qadarta Eebe”.
Oo taxadarka ah.
Ugu dambayntii walaalayaal in la taxadaro oo talo kasta oo caafimaad oo lagu xakamaynayo cudurada faafa la qaato waa masalo diini ah oo uu islaamkayagu ina farayo inta aysan cid kale oo dhami ina farin.
Eebbe ayaynu badbaado waydiisanaynaa Adduun iyo Aakhiraba.